SafeExchangeCoin စျေး - အွန်လိုင်း SAFEX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို SafeExchangeCoin (SAFEX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ SafeExchangeCoin (SAFEX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ SafeExchangeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $4 826 433.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ SafeExchangeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
SafeExchangeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SafeExchangeCoinSAFEX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00284SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ယူရိုEUR€0.0024SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00216SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00259SafeExchangeCoinSAFEX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0255SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0179SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0629SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0106SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00378SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00394SafeExchangeCoinSAFEX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0636SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.022SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0152SafeExchangeCoinSAFEX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.213SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.479SafeExchangeCoinSAFEX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00389SafeExchangeCoinSAFEX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00427SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0885SafeExchangeCoinSAFEX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0198SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.3SafeExchangeCoinSAFEX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.37SafeExchangeCoinSAFEX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.1SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.209SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0787
SafeExchangeCoinSAFEX သို့ BitcoinBTC0.0000002 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ EthereumETH0.000007 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ LitecoinLTC0.00005 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ DigitalCashDASH0.00003 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ MoneroXMR0.00003 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ NxtNXT0.203 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ Ethereum ClassicETC0.000394 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ DogecoinDOGE0.827 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ZCashZEC0.00003 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ BitsharesBTS0.108 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ DigiByteDGB0.105 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ RippleXRP0.00918 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ BitcoinDarkBTCD0.0001 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ PeerCoinPPC0.0101 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ CraigsCoinCRAIG1.26 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ BitstakeXBS0.118 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ PayCoinXPY0.0484 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ ProsperCoinPRC0.348 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ YbCoinYBC0.000001 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ DarkKushDANK0.889 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ GiveCoinGIVE6 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ KoboCoinKOBO0.618 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ DarkTokenDT0.00262 SafeExchangeCoinSAFEX သို့ CETUS CoinCETI8